Kuunza mota kubva kuAustria kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Unoda ruoko kupinza yako mota yeAustria kuUnited Kingdom?
Kana mota yako yatove muUnited Kingdom, saka tinogona kubatsira nemapepa kuti mota yako inyoreswe. Isu tinogona zvakadaro kubata chiitiko chese chekutora yako mota yeAustria kuenda kuUnited Kingdom, pamwe nematanho ese anodikanwa kuinyoresa kana mota isiri muUnited Kingdom kare.
Kuendesa mota yako kuUnited Kingdom
Isu tiri nyanzvi mune zvekushandisa uye tinogona kubatsira nekupinza mota yako kuUnited Kingdom zvakachengeteka.
Kana mota yako yatove muUnited Kingdom, tinokwanisa kunyoresa mota yako uri kure - kana kuti unogona kuunza kunzvimbo yedu kuti mabasa anodikanwa apedziswe. Nekudaro, kana iwe uchida kutakurwa kwemotokari yako kuenda kuUnited Kingdom kune nzira dzakasiyana dzakasiyana dzekutakura dzinogona kushandiswa.
Zvichienderana nezvamunoda, mota inogona kutakurwa kupinda mukati kuenda kuchiteshi, kana kutakurwa nzira yese pane anotakura mota. Yedu mota logistics mhinduro dzakanangana nemotokari yako, saka tanga tibate kuitira kuti tinzwisise zvirinani zvaunoda.
Yakawanda sei mutero iwe yaunoda kubhadhara kupinza mota yako kubva kuAustria?
Kana uchipinza mota kubva kuAustria kuenda kuUK zvinokwanisika kuti uite pasina kubhadhara chero mutero. Ichokwadi kuti mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani. Mukuona kweHMRC chero zvishoma inoonekwa semotokari nyowani, saka iwe unofanirwa kubhadhara VAT - zvisinei, izvi zvinogona muzhinji kuti zvidzokere kumashure.
Kana uchinotora mota nyowani kana ingangoita nyowani, iyo VAT inofanirwa kubhadharwa muUK saka ndokumbira usazeze kumhanya chero mibvunzo yapfuura patiri tichironga zvekutenga mutero usati watenga.
YeAustria mota kugadzirisa uye nyora mvumo
Kune mota dziri pasi pemakore gumi kubva kuAustria, ivo vanofanirwa kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa. Isu tinogona kuita izvi nemaitiro anonzi kuwirirana kana kuburikidza neIVA kuyedzwa.
Isu tinofambisa maitiro ese aya panzvimbo yako, kunyangwe izvo zviri kubata nechikwata chevakadzidzisa chemugadziri wemota yako kana Dhipatimendi reZvekutakura, kuti iwe ugone kuzorora neruzivo kuti iwe unonyoreswa zviri pamutemo neDVLA munguva pfupi kwazvo inogoneka.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuAustria kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo inomhanyisa kuratidza mamaira paawa kuverenga uye neshure mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Isu takavaka yakawandisa katarogu yemagadzirirwo uye mamodheru emota isu atinotora kunze kuti tikwanise kukupa iwe nekukurumidza mutengo fungidziro yezvinoda mota yako wega.
mota dzinopfuura makore gumi
Kuunza mota yako kubva kuEU
Kufarira kuverenga zvakawanda nezvekuti yako EU mota inyoreswe?
KUPINDA MOTO YAKO KUBVA KUEU
Isu tinopa iyo yakazara yeAustria mota yekupinza sevhisi
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve kupinza mota dzeAustria
Tinogona kubatsira nekutakura mota yako kubva kuAustria?
Chaizvoizvo - isu tinogona kutora hanya nezvese chiitiko chekutora mota yako kuUnited Kingdom kubva kuAustria.
Kune here chero bhenefiti kune iyo IVA bvunzo kunyangwe mota yangu inogona kunyoreswa neCoC?
Zvichienderana nemotokari iwe unozobatsirwa nemutengo wemutengo unodhura kana nzira yekunyoresa iri neyeIVA bvunzo kana ichienzaniswa neSitifiketi cheKutevedzera.
Imotokari yangu yeAustria ine inishuwarenzi here?
Munguva yekufamba kwemotokari yako kubva kuAustria, inishuwarenzi. Ipo pachayo pairi yakafukidzwawo mune chero tsaona.
Ndinogona kutyaira mota yangu ichiri kunyoreswa?
Kana yako inishuwarenzi ichikubvumidza iwe kuti uite uye isu tiri kunyoresa mota yako tichishandisa kunyoresa kwedu kure kana kwezuva rimwe chete kunyoresa sevhisi zvinoenderana nemotokari.
Mota yangu yeAustria yatove muUnited Kingdom - unogona here kubatsira?
Tinogona kubatsira pane chero nhanho yekuunzwa kwemotokari yako yeAustria. Ingotizivisa chaizvo danho rekupinza iri uye yako quote ichagadziriswa zvinoenderana.
Mhando dzeAUSTRIAN mota
Kutenda nekuita basa rakanaka mukuunza mota yedu kuUK uye kupedzisa gadziriro dzakakodzera. Tichaedza kutumira sevazhinji vatengi veDubai nzira yako sezvinobvira.
Ositiriya, Bherujiyamu, Furanzi, Jerimani, Liechtenstein, Rukuzemubhogu, Monako, Netharenzi, Siwizarendi, the national, Putugaro, Speini, Rashiya, Porendi, Czech, Sirovhakiya, Hangari, Girisi, Saipurasi, Dhenimaki, Siwidheni, Noweyi, Finirendi, Aisirendi, Itari, Republic of Ireland
Bhahareni, Izirayeri, Jodhani, Kuweti, Rebhanoni, Ribhiya, Moroko, Omani, Kwata, Saudhi Arabhiya, Tunisiya, Teki, Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi
Kanadha, USA, Caribbean
Hong Kong, Singapowo, Tairendi, Japani, Marazhiya